ဆော်လမွန်ငါးနှင့်မုန့်ငံပြာရည်နှင့်အတူခေါက်ဆွဲ - မုန့်နှင့်အတူဒိန်ခဲနှင့်အတူအနီရောင်ငါးနှင့်အတူ spaghetti ၏ချက်ပြုတ်နည်းများ, ခရမ်းချဉ်သီး, ကြက်သွန်ဖြူဆော့စ်
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, မုန့်ငံပြာရည်အတွက်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲအီတလီအစားအစာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမဟုတ်ပါဘူး။ ဤအချက်အလက်နံ့သာမျိုးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဆော်လမွန်ငါး၏အပိုငျးပိုငျး, ဒိန်ခဲနှင့်ပင်လယ်စာမွှေး, အရည်ရွှမ်းဖြစ်ကြပြီးသင်၏နှုတ်၌အရည်ပျော်ရှိရာစမ်းသပ်ဖို့အဆင်သင့်နေသောသူအိမ်မှာချက်ပြုတ်စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်အရသာပေါင်းစပ်တန်ဖိုးထား, ဝမ်းနည်းမပေးပါ။
ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ - အချိန်ကိုခေါက်ဆွဲနှင့်ငံပြာရည်ချက်ပြုတ်ဘို့အလုံအလောက်ချက်ပြုတ်ဘို့ချထားပေးရှိရာအများဆုံးရိုးရှင်းပြီးအမြန်ဟင်းလျာများ၏တဦးတည်း။ ဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အကြက်သွန်နီနှင့်ကြက်သွန်ဖြူဒယ်အိုးအတွက်မိနစ်အနည်းငယ် tantalized, ဆော်လမွန်၏အချပ်ပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအားလုံးနှစ်ဖက်ပေါ်သူတို့ကိုကြော်။ ထို့နောက်မုန့်နံ့သာမျိုး, ဟင်းသီးဟင်းရွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်အဖုံး5မိနစ်ငြိမ်းအေး။ အဆိုပါခေါက်ဆွဲနှင့်အတူရောနှောနှင့်ဝတ်ပြုကြလော့။
ဆော်လမွန်ငါးနှင့်မုန့်နှင့်အတူခေါက်ဆွဲအရည်အသွေးကိုငါးပါဝငျသညျ။ ဖိတဲ့အခါမှာလတ်ဆတ်တဲ့ဆော်လမွန်ငါးလွှာနှင့်အရည်အသွေးသည်ပုံပျက်နေသောမရသင့်ပါတယ်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းမပြုမီမှာလည်းဂရုတစိုက်ငါး၏ဇာတိပကတိအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်သွေ့ခြောက်သောအရိုးထဲကနေဖယ်ရှားရမည်။
ငါးတဖဲ့သာဤကိစ္စတွင်အတွက်သူတို့အညီအမျှချက်ပြုတ်နေကြသည်နှင့် appetizing ကြည့်ရှုမည်, တူညီတဲ့အရွယ်အစားဖြစ်သင့်သည်။
creamy spaghetti ငံပြာရည် - သင်ရုံ5မိနစ်အတွင်းအဆာပြင်ဆင်ထားရန်ခွင့်ပြုမယ့်စာရွက်။ ဤသည် 20% အဆီ, ထောပတ်, မုန့်ညက်နှင့်နံ့သာနှင့်အတူမုန့်တောင်းမည်။ အဆိုပါနည်းပညာကိုရိုးရှင်း: အထောပတ်နှင့်မုန့်နှင့်အတူပေါင်းစပ်အညိုရောင်မှမုန့်ညက်, အထူသည်အထိ tantalized ။ အလေးချိန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့် airy ရရှိသော, နှင့်ခေါက်ဆွဲလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရသာပေးသည်။
ရေနံ - 50 ဂရမ်,
မုန့်ညက် - 20 ဂရမ်,
မုန့် 20% - 250 ml ကို;
အစိမ်းရောင် - 40 ဂရမ်,
nutmeg -5ဂရမ်
ကြော်မယ့်ဒယ်အိုးထဲမှာမုန့်ညက်, ထိုထောပတ်, မုန့်ထပ်ထည့်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှတည်ထားပါ။
ရာသီ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်ငံပြာရည်နှင့်အတူဖြန်း, အပူထဲကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
တစ်ဦး creamy ငံပြာရည်အတွက်အနီရောင်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲဖှယျနှင့် Deflation ရှိလျှင်, ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပါ။ သူတို့ကငါးကိုပိုမိုဖော်ပြပြုပါ vapidity ခေါက်ဆွဲနှင့်ဖက်တီးမှေးမှိန်လတံ့သော, တစ်ပန်းကန် appetizing အရောင်နဲ့ကြွယ်ဝသောချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အချဉ်အရသာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ချက်ပြုတ်စဉ်အတွင်း, သင်မုန့်ခရမ်းချဉ်သီးသန့်စင်သော, ပြီးတော့မီးပေါ်မှာငံပြာရည်ထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်။
မုန့် - 250 ml ကို;
အသီးဖျော်ရည်ခရမ်းချဉ်သီး - 400 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့ -3PCs; ။
ရေနံ - 80 ml ကို;
ဆော်လမွန်ငါး - 300 ဂရမ်;
ပြုတ်ခေါက်ဆွဲ - 450 ဂရမ်
chives ဆီအုံနွေးနွေး။ အဖြစ်မကြာမီသူတို့က, မိုက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ဆော်လမွန်၏ချပ်ဝတ်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
ယင်းမုန့် Add,3မိနစ်ပြီးနောက်, pyurirovannye ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပါ။
အခြား5မိနစ်စိတ်ပျက်ဖို့ငံပြာရည်ချန်ထားပါ။
တစ်ဦး creamy ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲချက်ချင်းစားပွဲ၌ဝတ်ပြုကြ၏။
တစ်ဦး creamy ဆော့စ်အတွက်ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ
တစ်ဦး creamy ဆော့စ်အတွက်ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ - အခြားအရသာလွယ်ကူစာရွက်, ငါး၏အစဉ်အလာအမြင်ပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဒီနေရာမှာအလေးပေးဆားဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူလတ်ဆတ်တဲ့အတိတ်ဆနျ့ကငျြဘပေါင်းစပ်အပေါ်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ နောက်ဆုံးသည်, Citrus အသီးဖျော်ရည်ကိုကျေးဇူးတင်, ပိုလျှံဆားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအရသာရရှိသည်ရဘယ်မှာသံပုရာထောပတ်ဆော့စ်အတွက် stewed ။
ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါး - 250 ဂရမ်;
သံလွင်မြက် - 10 ဂရမ်,
tagliatelle - 400 ဂရမ်
အထုပ်လမ်းညွန်အဆိုအရ Cook က tagliatelle ။
သံလွင်ဆီထဲမှာကြော်, ကြက်သွန်, မုန့်, ရေနံ, သံပုရာဖျော်ရည်ကို add ပြီးတော့5မိနစ်။
ရာသီ, ဆော်လမွန်၏အပိုငျးပိုငျး ထား. ,3မိနစ်ပြီးနောက်, အပူကနေငံပြာရည်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
အတူခေါက်ဆွဲ ဆော်လမွန်ငါးဆား ငါးမိနစ်ထုံမွှန်းခံရမီမုန့်ငံပြာရည်။
တစ်ဦး creamy ဒိန်ခဲငံပြာရည်အတွက်ခေါက်ဆွဲ
ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူ spaghetti မုန့်ငံပြာရည်အတွက် - ထိုဂန္စားသောက်ဆိုင်မီနူး။ တစ်ဦးဒိန်ခဲငံပြာရည်၏အခြေခံပေါ်မှာထူသောဒိုင်းကာနဲ့ပေါင်းစပ်အစဉ်အလာ, က "ပြောသော" spaghetti ။ ဒိန်ခဲကောင်းစွာသည်းခံဖြစ်ပါတယ်အပူကုသမှုအလျင်အမြန်အရည်ပျော်အထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မုန့်နှင့်နို့ မှလွဲ. အဘယ်သူမျှမဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ်သည်, အလျင်အမြန်ထုတ်ကုန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်အနံ့ပေးသည်။
spaghetti - 350 ဂရမ်;
ရေ -3ဌ;
ဆော်လမွန်ငါး - 850 ဂရမ်;
မုန့် - 125 ml ကို;
နို့ - 125 ml ကို;
စပျစ်ရည် - 100 ml ကို;
Parmesan - 100 ဂရမ်;
အစိမ်းရောင်ပဲ - 250 ဂရမ်
အဆိုပါကြက်သွန်ဖြူ Add, ကြက်သွန်, စပျစ်ရည်နှင့် 10 မိနစ်များအတွက်ငံပြာရည်အငွေ့ပျံ။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် spaghetti ချက်ပြုတ်ဖို့ထားလေ၏။
နို့, မုန့်, ခြစ် Parmesan Enter နှင့်3မိနစ်ခန့်မျှတည်ထားပါ။
အဆိုပါပဲစေ့တွေဟာနှင့်ချက်ပြုတ် spaghetti ထားပါ။
ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ ပုစွန်နှင့်မုန့်ငံပြာရည် - ဆော်လမွန်၏နူးညံ့သောအချပ်တွေနဲ့သိပ်သည်း, ချိုမြိန်ပုစွန်အသားပေါင်းစပ်သာယာသော aftertaste အရွက်ထားတဲ့အတွက် Win-Win ကြော့ညစာ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, တစ်ဦးဆွန်းခေါက်ဆွဲရွေးချယ်ဖို့ပိုကောင်း: ပင်လယ်သတ္တဝါဖျော်ရည်နှင့်အရသာနှင့်ပြည့်စုံငံပြာရည်, အထဲမှာ "ပြွန်" များ၌။
Penn - 300 ဂရမ်;
ရေ - 2.5 ဌ;
ဆား - 40 ဂရမ်,
ဆော်လမွန်ငါးလွှာ - 250 ဂရမ်;
peeled ပုစွန် - 200 ဂရမ်;
ရေနံ - 60 ml ကို;
Parmesan - 80 ဂရမ်
Cook ကအထုပ်လမ်းညွန်အဆိုအရဆားရေပွက်ပွက်ဆူနေသောထဲမှာ Penn ။
အဆိုပါပုစွန် Add,3မိနစ် - ထိုမုန့်နှင့်5မိနစ်မျှတည်ထားပါ။ Penn နှင့်အတူဆမ်း။
ခေါက်ဆွဲအဘို့အ creamy caviar ငံပြာရည်
အတော်များများကတစ်ခါတလေစားဖိုမှူးမျိုးစုံမှကြိုက်တတ်တဲ့ ငါးနှင့်အတူ spaghetti တစ်ဦး creamy caviar ငံပြာရည်၌တည်၏။ ဒါဟာအစားအသောက်၏အသွင်အပြင်လက်ရာမြောက်သောနှင့်ပိုမိုချမ်းသာသည်, ငံပြာရည်စိတ်ဝင်စားဖို့ texture နှင့်ကြက်ဥ၏အံ့မခန်းကွဲ၏ကြွယ်ဝသောငန်အရသာရရှိသွားတဲ့ရာမှငံပြာရည်, ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒီ option ခဲဘတ်ဂျက်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်စားသောက်ဆိုင်မီနူးထဲမှာဘုံဖြစ်ပါတယ်။
spaghetti - 200 ဂရမ်;
မုန့် 30% - 250 ml ကို;
သံပုရာအခွံ - 20 ဂရမ်
ကြက်ဥ - 60 ဂရမ်,
ဆားနယ်ဆော်လမွန်ငါး - 150 ဂရမ်
"အယ်လ်ချို" ၏တစ်ပြည်နယ်7မိနစ်ဘို့ရေကိုပွက်ပွက်ဆူနေသောထဲမှာခေါက်ဆွဲပြုတ်။
ထိုအတောအတွင်းမှာတော့သံပုရာ၏အသီးဖျော်ရည်များနှင့် zest နှင့်အတူမုန့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ထိုအခါ5မိနစ်အဘို့အနိမ့်အပူကျော်ငံပြာရည်အနည်းငယ်အအေးနှင့်ကြက်ဥထည့်ပါ။
ရာသီခေါက်ဆွဲနှင့်ဆော်လမွန် caviar ငံပြာရည်။
တစ်ဦး creamy ကြက်သွန်ဖြူဆော့စ်အတွက်ဆော်လမွန်ငါးနှင့်အတူခေါက်ဆွဲ
စပ်အစားအစာသင့်လျော်၏မိတ်ဆွေတို့ကို ခေါက်ဆွဲ fettuccine နံ့သာမျိုးနှင့်ကြက်သွန်ဖြူနှင့်အတူမုန့်ငံပြာရည်အတွက်ဆော်လမွန်နှင့်အတူ။ ဒါဟာတိုက်ရိုက်အရသာ "ကိုင်" ပိုမြန်ခြင်းနှင့်ကြာကြာအတူ impregnated ပြား, ကျယ်ပြန့် strips တွေအဖြစ်, ကြွယ်ဝသော creamy ဝက်အူချောင်း, နံ့သာများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပေါင်းစပ်ရာတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့်အီတလီမှာခေါက်ဆွဲ၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
fettuccine - 450 ဂရမ်;
ဆော်လမွန်ငါး - 550 ဂရမ်;
မုန့် - 300 ml ကို;
Parmesan - 120 ဂရမ်;
ကြက်သွန်ဖြူလေးညှင်းပွင့ -5PCs; ။
ငရုတ်ကောင်း -5ဂရမ်,
အမွေးအတောင်အစိမ်းရောင်ကြက်သွန်နီ -5PCs ။
ပူနွေးသောမုန့်, ငရုတ်ကောင်း, ကြက်သွန်ဖြူ Add နှင့်5မိနစ်ချက်ပြုတ်။
ဤအချိန်အတောအတွင်း fettuccini ဘို့ဆားရေထဲမှာပြုတ်။
ကြက်သားလွှာ - မီးဖို၌ချက်ပြုတ်နည်းများ
ဆတ်တောက်ခြင်း - အိမ်မှာပျော်မွေ့စရာများအတွက်အကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်နည်းများ
Puff pastry ၏ကြက်သွန်ဌာပနာမု
ဒါကိုတာဂျွန်ဆင်နဲ့ Chris မာတင်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာနေ့စွဲကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်
Hazelnuts - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
ဗလာဒီမာပူတင်ကတစ်ကြယ်အီတလီတန်ဖိုးရှိ ... တစ်ဦးထောင်ဒဏ်နှင့်အတူ rendezvous?
သငျသညျသငျယူဖို့နှင့်သင့်ခြံစခွေငျးငှါအဘယ်အရပ် 35 မခွဲခြားကစားကွင်း,!
အဆီအမြိုးသမီးမြားအဘို့အညနပေိုငျးဆင်မြန်း - အားလပ်ရက်များအတွက်အလှဆုံး
သငျသညျမှန်းဆမပြုခဲ့ရသောမိတ်ကပ်လျှောက်ထားရန် 13 လျှို့ဝှက်ချက်များကို,
ဆိုင်းဘုတ်များ - သူနာပြုမိခင်များအတွက် Mastitis
Hi-tech ရဲ့ style အတွက်မီးဖိုချောင်
န့်ကိုကိတ်မုန့်ပေါ်မှာ Herring ကိတ်မုန့်